Ingalo ephezulu ye-Wafer loader China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component > Ingalo ephezulu ye-Wafer loader
Ingalo ephezulu ye-Wafer loader
I-Model No.: JH.SC.016
Ukupakisha: Thumela i-carton ngebhokisi lezinkuni
Amandla Wokunikezela: 5000 pieces/month
Sisebenzise u- 99.5% we-aluminium oxide ceramics ukwakha ingalo eminingi ye-alumina ceramic ngokusekelwe kwenkampani yamakhasimende noma izidingo ezikhethekile.
Ingalo ye-Alumina yeceramic inenzuzo ecacile uma iqhathaniswa nezensimbi, ezifana nokugqoka okukhulu ukugqoka, ukugxila okukhulu kakhulu, ukuphakama okuphezulu okushisa okunamandla nokuvimbela ukubola. Ngenxa lezi ngokwayo izakhiwo, ingasetshenziswa e varity eviroment elibuhlungu, efana tempreature eliphezulu kakhulu, zamakhemikhali isimo vaccum
, okwamanje kunomsebenzi wesikhathi eside kakhulu wesevisi kunengalo yensimbi.
Sinomshini wemishini ecacile ephezulu, njengomshini ophezulu wokugaya phezulu ne-CNC, ingasisiza ukuba simshise ingxenye ye-ceramic ibe yindleko kakhulu ngobukhulu. Kungakhathaliseki ukuthi kukhonjiswa noma ukukhiqizwa okukhulu kwezindleko, sizokufinyelela.
Loluhlobo lwengalo enhle ye-ceramic luvame ukusetshenziswa emishini ye-semiconductor, imishini, ukunakekelwa kwezempilo kanye nensimu ye-vacuum.
Thina, ku-Jinghui Industry Ltd iyinhlangano ehamba phambili yokukhiqiza izingxenye ze-ceramic e-China eminyakeni engaphezu kwengu-11.
Izindlela zokukhiqiza ezikhethiwe zifaka ukucindezela okumile, ukucindezela okushisayo, ukucindezela kwe-isostatic, ukufaka umjovo we-ceramic, i-extrusion nokukhethwa kwezinto. Futhi sineziqu zethu eziphezulu zokucubungula kanye nokuqhuma komshini wokukhiqiza. Njenge-metallizing, i-glazing, ukugaya okuhle, ukufakelwa kwe-CNC, ukusika kwe-laser njalonjalo.
Imikhiqizo yekhwalithi ivela ebucikweni bombuso wezinqubo zokukhiqiza, futhi idinga ithuluzi lokuhlola eliphambili. Imishini yokuhlola eyinhloko ihlanganisa i-CMM, iphrojekitha njll.
Ngemikhiqizo yethu enokwethenjelwa, isevisi yobuchwepheshe kanye nekhredithi enhle esungulwe ngamakhasimende, siye sithumela imikhiqizo yethu eYurophu, eNyakatho Melika, e-Asia, eNingizimu Melika, eNingizimu Afrika ngaphezu kwamazwe angama-50
Izigaba zomkhiqizo : Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component
I-Metallised Alumium Oxide Ceramic Circle
High Precision Metallized Aluminium Oxide Ceramic Ring
Ukushisa okuphezulu okushisa okucwilisayo kugoba ipulangwe ye-ceramic
95 i-alumina yokushisa kwe-ceramic
I-Alumina Cylinder Ceramic